३ श्रावण, २०७७ – Mero UK
Day: ३ श्रावण, २०७७
३ श्रावण, २०७७ ३ श्रावण, २०७७ / अनलाइन खबर
३ साउन, काठमाडौं । डा. सूर्यराज आचार्य औपचारिकरुपमा साझा पार्टीबाट अलग्गिएका छन् । तर, अहिले पनि सो पार्टीप्रति उनको प्रेम उत्तिकै छ । उनीसँग गफिँदा यस्तै महसुस हुन्छ । आफू अलग हुनासाथ माउ पार्टी र त्यसका नेताहरुलाई शब्दकोष पल्टाउँदै सत्तोसराप गर्ने नेपाली राजनीतिको पुरानो विकृति हो । तर, » पुरा समाचार पढ्नुहोस
खोकनामा रोपाइँको खुशी
३ साउन, काठमाडौं । ललितपुर खोकनाका मन्त डंगोल र उनकी श्रीमती हरिमाया शुक्रबार मध्यरातिसम्म भलाकुसारी गरेर बसे । कुराकानीको विषय थियो- शनिबार खुदोलमा हुने रोपाइँ । ‘धानको बिउ, खेल जोत्ने ट्याक्टर र रोपाहारको व्यवस्था कसरी गर्ने ? रोपाईँ होला कि नहोला ? प्रहरीले अस्तिजस्तै लठ्ठी पो हान्ने हो कि ? » पुरा समाचार पढ्नुहोस
३ साउन, काठमाडौं । टीकोटालो गरेको सात महिनापछि गत असारको सुरुवाततिर दुलही भित्र्याउँदा समीर बराइली खुसी नै थिए, यद्यपि मन फुकाएर खर्च गर्न भने सकिरहेका थिएनन् । विगत दुई वर्षदेखि सुनचाँदी व्यवसायमा संलग्न रहे पनि कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण सरकारले लगाएको लकडाउनले उनको व्यापार चौपट भइसकेको थियो । काठमाडौँको उत्तरी भेगमा रहेको कपनस्थित आफ्नै दुईतले घरको …
काठमाडौंको बाढी : दुःख पाइस् मङ्गले, आफ्नै ढङ्गले Read More »
३ साउन, काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात चलाउन यातायात व्यवसायीहरु तयार भएका छन् । केही दिनभित्रै सार्वजनिक सवारीहरु चल्न सुरु गर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । सरकारले असार २६ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकामा तीन जिल्ला र बाहिरको हकमा जिल्लाभित्र सिट क्षमताको आधा यात्रु राखेर सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो । …
सार्वजनिक सवारी चलाउन यातायात व्यवसायी राजी Read More »
सम्पदा पुनर्निर्माणमा भक्तपुर मोडल
२ असार, काठमाडौं । असार मध्यतिर भक्तपुरकै पाँचतले (न्यातपोल) मन्दिरको पुनर्निर्माण सकियो । त्यो पनि लागत अनुमानभन्दा आधा कम खर्चमा । हो, ६५ लाख १३ हजार ३५८ रुपैयाँ २७ पैसा लागत अनुमान गरिएको न्यातपोल मात्र ३० लाख रूपैयाँ बनेको छ । यो जनता जागेपछि मिलेको सफलता हो, जसलाई सम्पदा निर्माणमा भक्तपुर मोडल पनि भनिन्छ । …
सम्पदा पुनर्निर्माणमा भक्तपुर मोडल Read More »
३ साउन, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५७ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभरका प्रयोगशालामा ३ हजार ३३१ नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरुमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । यससँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या १७ हजार ५०२ पुगेको छ । उनीहरुमध्ये ४० जनाको मृत्यु भएको छ भने ११ हजार ६३७ जना निको …
३३ सयबढी नमुना परीक्षण, ५७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि Read More »